China Idler / Front Idler fekitari uye bhizimisi | Bonovo
Idler / Pamberi Idler
Idlers inongedzo uye nzira yekugadzirisa iyo track tension yeyekuungana magungano. BONOVO idler akagadzirwa nemazvo uye kupisa kunorapwa, kuzorwa uye kusimbiswa kuti upe hupenyu hwakavimbika hwakareba.
Yakakwira yepamusoro chaiyo yekumberi idler inogona kudzora kushushikana uye kudzikisa kutakura mutoro kuti iwedzere hupenyu hwayo hwese.
Mavara Dema kana yero
Nzira Nokuchengetedza kukanda D85ESS-2 ldler
Pamusoro kuomarara HRC48-54.pasi: 4mm-10mm
Bhenefiti yekushandisa yemhando yepamusoro idlers: yakakosha kupisa kurapwa maitiro kunogumira muhupenyu hwakareba, iro rakanyanya degree rekuwandisa kuyedza rinogona kudzivirira kupatsanurwa, uko zvese kunokuponesa iwe mari yekuchengetedza.
Sarudza yako modhi: isu tinogamuchira zvese hombe kuraira uye end-vashandisi odha
Pasuru uye kutumira: isu tine 7000m2 imba yekuchengetera, kuchengetera zvinhu zvakakwana zvekukurumidza kuendesa, ndapota nyorera kutengesa kwedu kwekukurumidza kurodha kuendesa.
KUMASHURE NOKUDZIDZA KURAIRA
Kunyangwe iwe uchitsvaga ngetani, rollers, idlers kana sprockets, kuodha zvikamu izvi zvinokurumidza uye zvinobudirira nerubatsiro rweako wekutengesa maneja. Isu tinemakwikwi emafekitori-akananga mitengo kune vese vanoita basa, vatengesi nevashandisi vemuchina, mazhinji emota dzepasi pedu dzinozotumirwa nekukurumidza chaizvo kubva kumatura edu e7000m2.
Pashure: Mutakuri Roller
Zvadaro: Sprocket / Chikamu
kati 277c zvikamu zvepasi nepasi
zvinokambaira zvepasi pemotokari
excavator track track
pamberi pekudyara musangano
kubota idler vhiri
mini undercarriage zvikamu
track idler zvikamu